10/10/2018 - Page 3 sur 4 -
« Kapisilinakà » : Ahazoana loka an’arivony
Nanomboka ny 1 oktobra teo, ary tsy hifarana raha-tsy ny 1 desambra izao. Misokatra ho an’ny rehetra ny lalao « kapisilinakà » miaraka amin’ny zava-pisotro Fresh, vokarin’ny Star sy ny orinasa Telma. Amin’io lalao io …Tohiny
Mbola nahantso vonjy. Vaviantitra iray manodidina ny 60 taona no niharan’ny habibiana tany Antseva Toliara, ny alahady lasa teo. Voafira famaky ary noloarana ny voamasony roa. Io no hitan’ny olona tany anaty ala, taorian’ny feo …Tohiny
Eric Rajaonary Nanohy ny fitsidihana tany Toliara Anisan’ireo mijery akaiky ny tontolo ambanivohitra, ny kandidà Eric Rajaonary. Omaly dia nitsidika tany Toliara ity kandidà laharana faha-17 ity. Toa ny fanaony dia misy hatrany ny fihaonana …Tohiny
Saraha Rabeharisoa Hamaly ny hetahetam-pon’ny vahoaka Samy manao izay ho afany avokoa ireo kandidà ho Filoham-pirenena amin’izao fotoana anatin’ny fampielezan-kevitra izao. Anisan’izany ny kandidà avy amin’ny antoko PLD, Saraha Rabeharisoa, laharana faha-9 ao amin’ny bileta …Tohiny